Zuum E60 Atụmatụ | Site na Linux
Zuum E60 bụ phablet 6 nke anụ ọhịa nwere atụmatụ dị oke ala na ọnụahịa dị oke ọnụ.
Zuum E60 na-bụ free ekwentị enwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa ụfọdụ naanị, na Mexico anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Lọ ahịa Coppel ebe a na-enye ya na ego nke $ 2,499 pesos na ego na $ 3,399 na akwụmụgwọ.
na Zuum E60 atụmatụ Ha dị mma maka ọrụ dị mkpa, ọ nwere ihuenyo 6-inch, ọ nwere 1Ghz dual-core processor, 512MB RAM, 4GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 32GB. Igwefoto n'ihu megapixel 5 na VGA n'ihu igwefoto (0.3 megapixels). Zuum E60 na-abịa na nchebe ihuenyo gụnyere yana mkpuchi mkpuchi nke anyị nwere ike ichebe ya na mberede ma ọ bụ nlekọta ọ bụla.
na Zuum E60 atụmatụ abụghị ezigbo kemmasi, ma n'ịtụle Zuum E60 ọnụahịa Anyị nwere ike ịsị na ha dabara maka ekwentị a, nke, dị ka anyị kwurula, enwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa ụfọdụ na Latin America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Njirimara nke Zuum E60
Cheregodi, achọrọ m iko nke zuum e60 na p50
Njirimara nke Zuum E508
Kpachara anya banyere ihe ị na-ebudata